पोखरा महेन्द्रपुलको मूख्य सडक भलपानीले भासियो, घरहरु जोखिममा [भिडियो]
By: रञ्जन अधिकारी - भाद्र ७ २०७८ सोमबार १२:१५-
पोखरामा निरन्तरको वर्षासँगै मूख्य बजार क्षेत्र महेन्द्रपुलको जमिन भासिएको छ । आइतबार बेलुकीदेखिको अविरल वर्षाका कारण पोखरा महेन्द्रपुलको सडक भासिएको हो । स्थानिय सेलवेज डिपार्टमेण्टल स्टोर्स अगाडि गरिमा विकास बैँकको आडको जमिनमा भ्वाङ परेको हो ।
सडक भाँसिदा आधा दर्जन घरहरु जोखिममा परेका छन् । आइतबार बेलुकी पानी परेपछि नै भ्वाङ पर्न सुरु भएको स्थानियले बताएका छन् । पानी पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि भलपानीले खाल्डो ठूलो बनाउँदै लगेको थियो । पछि विजुलीको पोल र सडकपेटी समेत भत्किन पुगेको थियो ।
सडक भाँस्सिदा पार्किङ गरी राखिएको नानो कार खाल्डोमै पर्न लागेकोमा तत्काल स्थानीयवासी र प्रहरीको टोलीले उचालेर सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए । भासिएको ठाउँमा प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा ढुंगा गिट्टीले पुरेर पानी तर्काउने काम भइरहेको छ । पोखरामा निरन्तर झरी परिरहेको छ ।
घरहरु जोखिममा, स्थानिय त्रसित
भलपानी खाल्डो हुँदै घरमुनी छिरेपछि स्थानीयवासी त्रसित बन्न पुगेका छन् । विन्ध्यवासिनी र नदिपुरदेखि पालिखेचोक हुँदै आएको भलपानी खाल्डोमा छिरेर भित्रभित्रै जमिनमा बगेपछि स्थानीयवासीले खतरा महसुस गरेका छन् । यो भ्वाङका कारण आधा दर्जन घरहरु जोखिममा परेका छन् । खाल्डोमा भलपानी पसेका कारण त्यो पानी जमिन मुनी कहाँसम्म पुग्यो ? कुन दिन अरु घरहरु पनि भासिने हो ? भन्ने त्रासमा उनीहरु छन् ।
खानेपानी लाइन विस्तारपछि व्यवस्थित नगर्दा जोखिम
लगानीका हिसाबले मेलम्ची पछिको देशकै दोस्रो ठूलो पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम अहिले भइरहेको छ । जाइकाको करिब पाँच अर्बको सहयोगमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको पानी वितरणका लागि पोखरा बजारमा कूल ९६ किमी पाइपलाइन विस्तार गरिँदैछ । खानेपानी संस्थानले छुट्टै १४ किमी पाइपलाइन विस्तारको कामसमेत अघि बढाइरहेको छ ।
खानेपानीको लाइन सडक क्षेत्रमै रहने भएकाले दायाँ बायाँ नै गहिरो खनेर पाइप विछ्याइएको छ । खनिसकेपछि माटोले पुरेर छाडिएको छ । सोहि कारण पनि पानी जमिन मुनि छिर्न सकेको हो । पाइप विछ्याएपछि माटोले मात्र पुरेर छाडिदिँदा भ्वाङ परिरहने पोखराको जमिन झनै कमजोर बनेको हो ।
जोखिमपूर्ण जमिन, भारयुक्त भवन
महेन्द्रपुल क्षेत्र सेती नदितर्फ पूरै भिर छ । डिलडिलमा अग्ला अग्ला घरहरु बनेका छन् । पूरानो बस्ती यहाँ मापदण्ड कायम छैन, कसैले मानेका पनि छैनन् । त्यसैले पनि सडकतर्फबाट जमिनमा पानी पसेमा निकै जोखिम छ ।
भूगर्भविद्हरुले सेति नदी आसपासका क्षेत्रलाई अति जोखिमपूर्ण कमजोर धरातल भन्दै ती क्षेत्रमा बस्न नहुने, घर बनाउन नहुने सुझावसँगै चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
महेन्द्रपुलमात्र हैन, पोखराका धेरै ठाउँमा जमिन भासिएका छन्
पोखरा नगर क्षेत्र र आसपासका अधिकांश स्थानका जमिन कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सन् १९९८ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र जियो साईन्स ईन्स्टिच्यूट अफ जर्मनीले पोखराको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनपछि दिएको प्रतिवेदनमा भौगोलिक सतह कमजोर भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा अर्मला, बिन्ध्यवासीनी, नदीपुर, अर्चले, महेन्द्रपुल, मालेपाटन, छोरेपाटन, सिमलचौर, सितापाईला लगायत सेतिनदीको पश्चिमतर्फको भाग कमजोर भएको जनाएको थियो ।
पोखराको जमिनमुनि कमेरो माटो छ । बर्षामा कमेरो माटो बगेर जाने गर्छ । आकाशको पानीले निकास नपाउनु तथा घरको छतको पानीको उचित व्यवस्थापन नहुनु पनि जमिन भासिनुको कारण भएको विज्ञ बताउँछन् । भू–बनावटको ख्यालै नगरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण जमिन भासिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पोखरा छोरेपाटन स्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफा माथिका बस्ती झनै खतरानक रहेको छ । डेभिडफल्स नजिकै बाटोमा गाडी गुड्दा समेत जमिन थर्किन्छ ।